भारतले आफ्ना नागरिकलाई कालापानी जान रोक लगायो! रोक लगाउनुको कारण यस्तो रहेछ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भारतले आफ्ना नागरिकलाई कालापानी जान रोक लगायो! रोक लगाउनुको कारण यस्तो रहेछ!
admin June 7, 2020 June 7, 2020 समाचार 0
दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा नेपाली नागरिकलाई जानबाट रोक्दै आएको भारतले पछिल्ला दिनमा आफ्नै नागरिकलाई पनि त्यहाँ जानबाट रोक्न थालेको छ ।भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशमा लकडाउनका कारण लगाइएका प्रतिबन्ध लगभग अन्त्य भइसकेको अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा भने विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध जारी राखिएको छ । जसअनुसार यतिबेला भारतीय प्रशासनले कालापानी क्षेत्रमा जान आफ्ना नागरिकलाई रोक लगाएको छ ।
काठमाडौं वासीका लागि खुसीको खबर, सरकारले जारि गर्यो सूचना
निको हुने घट्यो, ज्यान गुमाउने र सङ्क्रमण बढ्यो
बीपी राजमार्ग अवरुद्ध